Ben'ny tanàna Güler nitazomina ny trano Bungalow Plateau Plateau | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra mainty hoditraTafika 52Ben'ny tanàna Güler nitazomina ny trano Bungalow Plateau Plateau
08 / 01 / 2020 Tafika 52, PHOTOS, ANKAPOBENY, Faritra mainty hoditra, TORKIA, TELPHER
tranobe bungalow guler cambasi yaylasi nozahana
Ben'ny tanànan'i Ordu Metropolitan Mehmet Hilmi Guler, tanànan'i Kabaduz ao Çambaşı Plateau dia namboarina tamin'ny fanadihadiana hita tao amin'ireo banga.
Ny bungalow, izay nosokafana vao haingana tao amin'ny Çambaşı Plateau, dia nahazo ny fankasitrahana ny olona rehetra hatramin'ny 7 ka hatramin'ny 70, izay te-hiala amin'ny fihenan'ny tanàna. Ny tranokala izay manintona ny saina amin'ny fiononany sy ny endrika manokana dia manaitra ireo mahita ny olom-pirenena manana ny fomba fijeriny manokana. Mandritra izany fotoana izany, ny seranan-tsambo miloko oram-panala no entin'ny olom-pirenena rehefa mankafy dia manavaka.
"TSY AVY ANY TORKIA, dia mangataka NERESİ BUR ny eo amin'izao tontolo izao"
Ny Bungalows dia maneho fotsiny ny feo mitondra ny tetikasa eto amin'izao tontolo izao, tsy any Torkia Tafika no ben'ny tanàna Metropolitan Dr. Hoy i Mehmet Hilmi Güler, ız Manohy ny ezaka ataontsika hanatsarana ny fizahan-tany ririnina any Ordu isika ary hametraka an'i Ordu ho vanona isaky ny vanim-potoana. Amin'izany toe-javatra izany, nanamboara bungalows ao amin'ny Plateau Çambaşı izahay izay iray amin'ny toerana mahafinaritra an'i Ordu amin'ny vanin-taona mafana sy ny ririnina. Ity toerana ity dia narafitra tsara. Tsy misy fampiononana. Tamin'ny fisokafan'ny bungalow, dia naneho fahalianana be ny olona hatramin'ny 7 ka hatramin'ny 70. Tsy vitan'ny avy any Torkia, dia mangataka aiza fa na tia tamin'izany izao tontolo izao. Mandra-pahatongan'ny May, feno ny famandrihana rehetra ataonay. Noho izany, dia hanampy vaovao isika amin'ny bungalows raha takian'ny fitakiana mafy. Asa miavaka izany. Raha mila manisy fanamarihana amin'ireo bango aho dia hotely kintana 5 izany
"HOTEL 5 FARITRA no tafakatra hatramin'ny faha-5"
Raha nanambara izy ireo fa notazonina tsirairay ireo fampanantenana, dia hoy ny Ben'ny tanàna Güler: “Ny asan'ny hotely 5 kintana dia mitohy any Çambaşı Yaylamız. Vita ny fanorenana ifotony ary tratra ny rihana faha-5. Aorian'io dia haosoana ny fepetra momba ny tontolo iainana. Mitohy eto ny asantsika dobo filomanosana eto. Miaraka amin'ny tetik'asa, dia mandroso haingana ho lasa tanàna Ordu i Ordu. Tazontsika ny fampanantenanay ”.
Ny ben'ny tanàna Güler: Santionan'ny Ski Çambaşı dia hahazo ny hasarobidiny
10 Million Dollar volavola ho an'ny Plateaux Çambaşı
Çambaşı Plateau dia Fialamboly Vaovao amin'ny Fizahan-tany Winter
Mamboly Hafanana miolikolika ny Çambaşı Plateau
Tonga any Plateau amin'ny Çambaşı amin'ny lemaka 2 arivo ny haavony
Plateau Plateau sy Sea Combine amin'ny Kabine Cable
Plaza Ski Çambaşı ho an'ny Desambra
Plateau Çambaşı nampidirina tao amin'ny EMİTT
Fiofanana ho an'ny mpiasa ao amin'ny Centre Plateau Ski Plateau
5 Star Hotel ao amin'ny Plateau Çambaşı
Bilaogera Gouler: 'Hanatsara an'i Unye' ny seranan'i Koyteyner
Ben'ny tanàna Guler 'Miresaka momba ny lalamby Samsun Sarp izahay'
Mpitondra an'izao tontolo izao: Fampirantiana ny Orphan Gülerse World Photography tamin'ny Tünel
Çambaşı Plateau Bungalow Houses
Bülent Ecevit Junction Roads Tapitra
Van Nandinika fiaran'ny fiara fitateram-bahoaka